Dadka Guursaday Ma ka Caafimaad badan yihiin kuwa aan Guursan? WQ: Axmed Shawqi | Gacanlibaaxnews
Dadka Guursaday Ma ka Caafimaad badan yihiin kuwa aan Guursan? WQ: Axmed Shawqi
February 20, 2018 - Written by C M
Daraasad cusub oo lagu daabacay wargeyska “ The Journal Of Health and Social Behavior” ayaa muujisay in marka dadka guursaday ay keli noqdaan iyaga oo kala taga ama midkood dhinto, in uu ku dhaco wax kabadan caadiffadda oo ka lunta. Badanaa waxa soo foodsaara hoos u dhac dhanka caafimaadka jidhka ah kaas oo aanay si buuxda uga soo kaban Karin xataa haddii ay mar labaad guursadan.
Natiijada kasoo baxday cilmi baadhis lagu sameeyey 8,652 rag iyo dumar isugu jira oo da’doodu u dhaxayso 50-60 sano ayaa cadaysay in niyad xu mo, walaac iyo werwer ka dhashay furriinku uu ku yimaado lamaanaha kal a tagay, kaas oo sii socda ama aan si buuxda u baabi’in xataa haddii qofku mar labaad guursado.
Faaidooyinka caafimaad ee guurka ayaa faro badan, tusaale ahaan daraa saddu waxay sheegtay in lamaanuhu ku dedaalo inuu midba kan kale caafi maadkiisa xoogga saaro oo markasta ka war hayo, gaar ahaanna ooridu ama afadu ay iyadu aad uga warhayso saygeeda caafimaadkiisa isla mark abana garato haddii caafimaad darro kusoo korodho, waxayna uga dhigan tahay sida ilaaliyaha albaabka ama “gatekeeper” oo markasta ilaalilanysa xaaladdiisa caafimaad.
Qalinkii Axmed Shawqi